Wararka Maanta: Sabti, Sept 1 , 2018-Hargeysa:Muran soo kala dhexgallay labada gole ee Guurtidda iyo Wakiiladda Somaliland
Xildhibaanada golaha Guurtida ayaa dood maanta ka yeeshay xeerkaasi ay markii hore wax ka bedel iyo kaabis ku sameeyeen oo ay dib ugu celiyeen Golaha Wakiilada, haseyeeshee halkii ay wax ka bedelka iyo kaabista ku sameeyeen aan waxba laga bedelin ay isku dhaafiyeen madaxtooyada iyagoo Guurtidda soo marin.
Xildhibaanada Guurtida ayaa sheegay in guurtidu masuul uga tahay shacabka arrimaha nabadgalyada, dhaqanka iyo diinta, waxaanay tilmaameen in xeer kasta oo golaha Wakiilada ka soo baxay ay iyagu dib usii qiimeeyaan hadii aanu shareecada ama dhaqanka waafaqsanayn dib loogu celiyo Wakiiladda.
Sidoo kale, xildhibaanada qaar ayaa soo jeediyey in la sameeyo xeer hoosaad ay ku wada shaqeeyaan labada gole si xeerarka la isku celiyo aan dhinac loo gees marin.
“Xeerar badan ayeynu golaha Wakiiladda Dib ugu celinay, waxa ka mid ah xeerkii kufsiga oo uu hadda shirgudoonkeenuna qoraal ka qoray , xeer aan dastoorka waafaqsanayn buu ahaa, diinta islaamkana aan waafaqsanayn, wax ka bedelkeenii iyo kaabisteena waa la diiday, waxaan soo jeedinayaa illaa xeer hoosaad wada yeelano golaha Wakilada aynaan xeer dambe ku celin.”ayuu yidhi Xildhibaan Cabdiqaadir Indho indho.
Shirgudoonka golaha Guurtidda ayaa qoraal ay xeerkaasi kaga hadlayaan u gudbiyey dhigoodda Wakiilada, iyadoo dhaliilaya in wax ka bedelkii ay ku sameeyeen xeerka kufsiga aan la raacin oo markiiba loo gudbiyey madaxweynaha taas oo la dhaqangaliyey,isla markiina la faafiyey.
Xeerkan kufsiga waxa dabada ka riixayey ururadda haween-ka ee xaquuqda haweenka u doodda, kuwaas oo madaxweynaha iyo golaha Wakiilada ku hambalyeye hirgalinta xeerkaasi oo ay sheegeen inuu wax badan ka qaban doono tacadiga dumarka lagula kaco.